mairie-antananarivo – CUA – BNGRC – APIPA : Fitrohana rano teny Ilanivato – Ampefiloha Ambodirano
CUA – BNGRC – APIPA : Fitrohana rano teny Ilanivato – Ampefiloha Ambodirano
auteur 27 martsa 2017
Notrohana tamin’ny alalan’ny « moto-pompe » ho ao amin’ny canal GR (Genie Rurale) ny APIPA ireo rano miandrona avy ao Ilanivato sy Ampefiloha Ambodirano ny Alakamisy faha 16 Martsa 2017 izay niarahan’ireo tompon’andraikitra sy teknisianina avy ao amin’ny CUA – BNGRC – GRC- APIPA sy ireo fokonolona avy amin’ireo fokontany Anosipatrana Atsinanana, Ampangambe Anjanakinifolo, Ilanivato Ampasika ary Ampefiloha Ambodirano.
An-koatra ireo dia tonga nitandro ny filaminana teny an-toerana ihany koa ny Polisy Monisipaly. Ny moto-pompe izay nampiasaina dia avy any amin’ny BNGRC ary afaka mitroka rano 100 m3 isaky ny 1 ora ary ny APIPA no niantoka solika izay mahatratra 40 litatra.
Araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra avy eny anivon’ny fokontany izay tonga nanatrika teo dia : « maro loatra ny trano miorina tsy ara-dalana ka manentsina ireo lakan-drano ivarinan’ny rano, etsy an-daniny koa ireo olona izay manohana ireo lakan-drano ka lasa tsy mikoriana tsara intsony ny rano maloto ». Araka ny nambaran’ny mponina ihany koa dia efa nanomboka ny taona 2015 izy ireo no niaina ny fidiran’ny rano any an-tokantrano sy fiakaran’ny rano toy izao ary manantena ny fandraisan’andraikitra ny tompon’andraikitra.
Araka ny nambaran’ny lehiben’ny vondrona mitantana ny loza mety ateraky ny loza ara-boajanahary Colonel Jaona ANDRIANAIVO dia : « ny tao-trano tsy efa irery, koa misaotra ny BNGRC, APIPA, Fokontany ary ny fanjakana tamin’izao fiaraha-miasa izao »
Tsy hijanona eto ny asa fa mbola hitohy amin’ny alalan’ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny fanalana ireo tohana izay manohana ny rano tsy hikoriana.
Fitsidihana nataon’ny filan-kevitra monisipaly tany amin’ny OMAVET Nanisana
Filankevitra Monisipaly : Taxi-Be – Taxi
Fivoriana ara-potoanana voalohan’ny mpanolontsaina monisipaly
Vaovao farany	Famaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany ny mpanolontsaina monisipaly
Fivorian’ny Mpanolontsaina Monisipaly ny Alatsinainy 24 Aprily 2017
Fivoriana niarahan’ny Fitaterana eto Antananarivo sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra